Colour painting and Color palette makers Nezvedu – Ruvara Picker Kubva Image
Nezvedu – Ruvara Picker Kubva Image
Bridgegalleryny.com ndiyo webhusaiti yakagadzirirwa iwe iwe unoda kutora mukana wemuvhara wemufananidzo kubva pamufananidzo, iyo RGB yekusarudzira color, chrome ruvara rwekutsanangudza, mufananidzo ruvara rwekusarudza, chrome ruvara rwekusarudza, adobe color picker, html color Selecter yemifananidzo, uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa zvewebsite ino.
Bridgegalleryny.com inobatsira kwazvo kune avo vanoshanda sevagadziri vemavara, vanopenda, mavara ekucheresa makara, android makara vatora, vanogadzira webhu uye vanogadzira, vashongedzo vekamuri, vavaki, uye humwe hunyanzvi hwakawanda hunogona kutora webhusaiti iyi.
Iyi Bridgegalleryny.com dandemutande inogona kutsanangura zvakadzama zvese zvemavara zvinhu zviri mumufananidzo, kusanganisira inonyanya kuverengedzwa ruvara, mhando ruvara, hex mavara, RGB mavara, uye akazara uye akazara mavara mavara
Kana iwe ukagadzira peji rewebhu kana bhurogi kana seyenyanzvi kana Amateur blog, ndine chokwadi kuti iwe uchave wakanyanya kuoma kubva kure nemuvara hexadecimal kana hex ruvara. Nekuti iyi ruvara hex inonyanya kushandiswa kuita shanduro dzakasiyana dzemavara pawebhu.
Chii chinorehwa neHex Ruvara?
Ruvara rweHex harusi chairo ruvara asi ndeimwe yenzira dzekunyora mavara mavara pakati pemamwe marudzi emakara mavara, seRGB, HTML, kana zvimwe zvinhu. Ndokusaka inonzi Hexa Ruvara rweCode, kana kupfupiswa saHhexa Code kana Hexa Coor kana Hex Colour.
Iko kunyora kunoshandisa manhamba kubva panhamba 0 kusvika 9 uye mabhii (kubva A kusvika F), nhamba yemakodhi ine mavara matanhatu, inogona kungova nehuwandu kana mavara, kana musanganiswa wehuwandu nemabhii. Ipapo sechimaki pamberi pake uchishandisa fenzi pakutanga.
# 000000 (nhamba chete)
#FCF (mavara chete)
# FF0000 (nhamba uye tsamba dzakasanganiswa)
Uye zvakare, kana iwe uri munyika yemifananidzo yekudhirowa uye kudhinda, iwe unofanirwa kuve uchiziva nezvezwi RGB ruvara, iro rakagadzirirwa Dhijitari Kuonekwa kana dijitari kuratidzwa.
Chii chinorehwa nerudzi rweRGB ???
RGB inomirira “Red-Green-Bhuruu” imhando yekuvhenekera ruvara (yekuwedzera color mode) inoshandiswa kune yekuisa zvishandiso senge scanner michina uye zvigadzirwa zvinobuda zvakaita sekutarisa kuratidza, mavara epakati (Tsvuku, Bhuruu, Green) zvichienderana nehunyanzvi hwe mudziyo unoshandiswa seCCD kana PMT pa scanner kana dijitari kamera, CRT kana LCD pachiratidziri chekutarisa.
Kana (Red-Bhuruu-Green) iyo mitatu mavara akasanganiswa kuti aumbe chena, uye ichi ndicho chikonzero nei RGB inonzi Yakawedzera Muvara kana imwe mitauro yemwenje mavara. Ruvara rweRGB ndiyo musimboti wemuvara unoshandiswa nemagetsi zvemagetsi senge terevhizheni, vatariri vemakomputa uye ma scanners. Naizvozvo, iwo mavara anoratidzwa neRGB anogara achipenya uye anonakidza, nekuti iwo akarongeka nenzira yekutarisa kuratidzwa, kwete kuprinta kuitira kuti ave akasununguka kutamba nemavara. Asi izvozvo hazvireve kuti RGB haina dambudziko nekuti RGB ruvara rwemavara runogara rwakasungirwa pakukora / kugona kwemifananidzo yemakomputa inotakura. Saka kana komputa isu yatinoshandisa iine yakanaka graphic kadhi uye LCD yekutarisa, iyo RGB ruvara kuratidza ichave iri nani pane tube yekutarisa ine yakajairwa giraidhi kadhi.
Mune zvinotevera, ini ndichatsanangura nzira dzaunofanira kushandisa kushandisa iwo mutengi wemifananidzo kubva pamufananidzo sezvinotevera:
1. Dzvanya Sarudza “Sarudza Mufananidzo Wako” wobva wasarudza iwo mufananidzo waunoda kuziva iyo kodhi kodhi uye kurodha.
2. Nyora zita remufananidzo mukoramu isina chinhu, mushure me “Enter zita remufananidzo”
3. Zvadaro tinya “Tumira”
Mushure meizvozvo yakakura kutevedzana kwemavara, mienzaniso yemavara, hex mavara, RGB mavara, uye mavara mavara akazara uye akakwana mune tafura.
Sei ?? Zviri nyore, handizvo?
Ndokumbirawo kuti muedze kuisa mifananidzo yakawanda yaunayo. Uye tarisa mhedzisiro yemasanganiswa emhando yakagadzirwa mune tafura. Mufananidzo iwo wawakanda unoratidza ese akakurisa mavara, hex ruvara, RGB Ruvara, uye zvakare zita remavara.
This "Nezvedu – Ruvara Picker Kubva Image" graphic has 20 dominated colors, which include . It makes so beautiful color combination inspired from this image.